Bogga dhanbalada jaceylka
dhanbaalo jaceel oo kooban
Welcome to My-Suraj My Photos
Nafyaheey degtay oo qabsatay qalbikeyga iyo maankeyga xukuntayna guud ahaan dareemaheyga , waxaan kuu soo dirayaa fariintaani xanbaarsan uduga Jaceylka iyo ubaxyada aduunka .
Jaceylkaaga qalibigeyga waa uu ku kobcay iyadoo haatan uu gaaray in aan maxbuus u noqdo Jaceylkaasiyo.
Dhambal Jaceyl :
Macaanto/macaae, Waxaa ii tahay ileys ii baxay waxaa sidoo kale ii tahay Jaceyl aan marna Laabtayda ka go'i karin,Waxaa habeen iyo Maalin Gacaliso/Gacliye i hor taagan waa adiga iyo Riyadaada,Macaaneey/Macaane Waxaan habeen iyo Maalin igu soo kordhaya waa Jaceylka aan ku qabo.
Inta Dumar/Rag filka'iyo Waxaad tahay Faceed tii u fiicneyd,Umaad dhalan Fudedd iyo Fowdo in aad Abuurtoo Faduul Aadmi maad baran,Fariidaan jaclaayey Fikradaada wacan iyo Fahmadaada Badanbaa Facaa aad ku dhaaftee Alle ii kaa Fayoobee Macaaneey/macaanoow.
Waa ay i soo gaartay fariintaadi wareegga dhiiga saameyneysay ayna ka buuxday rabitaanka Jaceylka iyo isu soo dhawaanshaha Jawaabta soo daahday-na waxa ay aheyd mid aan ku eegayay inta uu la eg yahay Sabarkaaga iyadoo aan sugi waaysanaa jawaabtaada ayaa waaxa ii keenay boostaale.
Waa ikanaa aniga oo kuu soo diraya fariin muujineysa sida niyad samida ah ee aan kaaga aqbalay Jaceylka iyo rajada macaan ee aad ii qabto , waxaana tix gilinayaa ilinta iiga dhacday dhulka markii aan aqriyay fariintaadii ugu dambeeysay ee aad ku soo bandhigtay cudurka ku hayo
Ka hor inta aan bilaabin qoraalka erayadaani ii ogolaaw in aan muujiyo waxa ka soo baxayo qalbigeyga ee muragada iyo farxadda leh taasi oo ah kuleylka Jaceylka aan kuu hayo .
Si aan kuugu muujiyo dareenkaasi waxaan kaa codsanayaa in aad iga aqbashid in aan kuluno
jabaab fariintasi ah
Wax lala yaabo ma ah in markii aad i aragtay uu kuugu dhacay cudurka indhaha l'a ee Jaceylkaasi ah ,shakigana iigama jira in aad dareemay nooca aragtidaada waxaan dareemay in uun wax jiraan , waadna i hamisay iyadoo aan wax hadal ah na dhex marin sidaa awgeed waxaan kaa ogalaaday in aan kuula kulmo si an u qiimeeyo cadeeynmaha Jaceyl ee aad ii Hayso .
Hala yaabin erayada aan kuu soo qoray maxaa yeelay Jaceylka aan kuu qabo ayaa sidaan iga yeelay oo guud ahaan mil kiyay nafteeyda waxaan ku jeclaaday Jaceyl kan ugu weyn kaasi oo awood u leh in dunida oo dhan uu saameeyo.
Xubin walba oo jirkaada ah waa ay ii yeereysaa , shaqsiyadaada , indhahaaga raganimadaada/naagnimadaada , fadlan baaqaasi oo dhan ee qalbigeyga ka soo baxaya igula eeg qalbi naxariisan.
Qaali/qaaliyoo ogsoonaaw in aan doonayay in aan noqdo qofka ku horeeya fariintaani oo aan doonayay in aniguba kuugu muujiyo baaxada shucuureed ee aan kuu qabo .
Ma qarinayo in aan horay ula dhacsanaa hanaankaada , deganaashahaada isu dheeli tirka quruxdaada , mana la yaabayo in eegitaankeygii uu ii igu filnaa in uu soo bandhigo quruxdaada .
Ku kolsoonaaw qaali/qaaliyoo in aan noolaaneyn la`aantaada oo aan dhibka Jaceylka iyo faa'idooyinkiisa aan kuula qeybsanayo .
Xabiibi/xabiibti waxa uu qalbigeyga u furan yahay in uu qaabilo uu soo dhaweeyo wax walba oo ka soo go'a qalbigaaga daacadna waan kuu ahay si aan guul u gaarno
to..........apart of my heart
iga gudoon marka hore salaan la isu diro tan ugu qiimo iyo qaayo badanoo kaaga soo go
,day qalbi furan , niyad faraxsan iyo naf kuu ooman inttaa kadib:
beerka iyo wadnaha iyobogaad iiga taalawaan bukaa ayaamahan waxaan baadi goobaa
bidhaantaada wacan iyo aragaaga bilicda leh baa hideeydu waxeey tahay inaad iga bad baadiso
boholyoowgaan I heeystiyo baahida aan kuu qabo hadaadan I bad baadinin
boodhari baan la daris noqon a I badin dibaatee bar barkeeyga I maaw oo iga bogsii dhibaatadan
from:naf jaceeyl la ildaran calaacal
gacaliye/gacalis hadii aad I xumeeysay waxba kama qabo ilaaheey ayaan talo saartay
lakiinse ogoow inaaan ku jeclahay waqti kasta oo aanan marnaba ku hilmaami doonin.
From:qof aan dan kaa laeeyn Calaacal
......Quruxdaba dhamaanteed Qofkii loo dhameeyee Eebbe qiimo siiyee Qab weeyni bilaabaa
Qiimo isu yeelaa Aayadaa quraankiyo Qiyaamaha hilmaamaa Qowlkii eebbe sheegee
Qofbaa ku waano qaato Qiimo looma yeeloo Dulka lagama qaadoo Qalbiga kii aan ku haayay
Niyadeyda qaadee U qashuucay kaligii Quudareeyay waa hore Inaan quud la wadaago
Iska daa qiimeeyn ee Qas iyo wareerbuu Qalbigeeyga ku beeray Naf jaceeyl qaribayna
Kuleey quusan meeysee Waa inaan dulqaataaQaadirkeey talo saartaa
Ma ahan jaceeylku wax ku cusub dunida mana ahan wax lala yaabo waana shay
qaali ah waxaana u maleeynayaa dadkuwaxaa u nasiib badan qofkii la jeclaado inkastoo
ay sidaas tahay arinkaad iga soo codsatay waa arin wanaagsan balse aan anigu wax ka
qabin Karin waayo?waxaan I heeysta mashquul aad u weeyn mana awoodo
inaan faraha la galo arimo jaceeyl ma ahan inaad qalad iga
Fahanto mana ahan inaan ku xumeeyo balse wa cudur daar uu igu qasbay
culeeys I heeysta sidaas daraadeed waxaan si xushmad iyo qadarin leh kaaga codsanayaa inaad iga raali aaato:
Xumaan kuuma quuroo Tag kuma oran karo Kalmadaan ku leeyaay
Kibir adigoon u aragoo Kalsoonidaas fahmaayo Ku qanci naftaada
dhanbaal macaan 1
Gacalo iga hano salaan aad iyo aad u qiimo badan salaantaasoo ka caraf badan miskiga, ka macaan malabka, ka qiimo badan diamond-ka, ka culus buuraha. Taasoo ka soo go’day qalbi si kal iyo laab ah kuu jecel, naf kuu hanwayn adiga kuna haminaysa kasbashada qalbigaaga qaaliga ah. Gclso waad la yaabi doontaa sababtaan warqaddan kuugu soo qoray anagoo maalin walba ku sheekaysanna netka telkana iskala hadalna, balse haka fakarin taa waayo qalbiga ayaa doonaya inuu kula xidhiidho oo kaa warqabo xilli walba kuuna muujiyo hadba dareenka nafta iyo heerka uu ka marayo jcylkaagu. Xubi aniga jacaylkaagu meel halis ah buu iiga yaallaa, wayna adagtahay sidaan kuu hilmaamo, waligay isma dhihin oo kuma fakarin intaa in le’eg ayaad qof jeclaan doontaa balse noqotay oo dhacday inaan sidaa kuu jeclaadee, macaan ha noqon mid igu cidlaysa jacaylkaas oo meel bannaan iiga dhaqaaqda. Qalbigaygu wuxuu ilaashada naftaada si uu u hanto jcyl waara, anigu waxaan ahay adiga! Ee adna noqo anigaKoleey waa aduunyee Mahadsanid
dhanbaal macaan 2
Qaali , nolosha aduunyada ayaa sidaa ah, huuno fiicnaan lahaydaa inaad qalbigayga arki karto waayo waxaad ogaan lahayd sidaan daacad kuugu ahay markaasaad dhib jacayl iga dhowri lahayd! balse waxaan rajaynayaa inaad ogaan doonto inshaa Allaah. waan ku jeclahay gacaliso, ifka noloshu waa adi, kaama maarmo oo qayb ka mid ah noloshaydi baad tahay, macaanto fadlan ila fahan jacaylka aan kuu qabo baaxaddiisa si aan u guranno mirihiisa, ogoow waxaynu dhisaynaa aasaaskii guri aan dagi lahayn si aan mustaqbalka ugu noolaanno. Macaan si fiican u akhri ereyadaan:
Ifka taan ka doortaay… qurxooney…ubixii naftaydaay….ilmadayda qubatiyo…ila arag jacaylkaan… adi kuu ilaashoo..aawadaa u beeriyo.. inanyahay adduunyada.. inta dumar la uumee… afrikiyo oroobba leh… adaan kaa astaystoo… naftu ku ogolaatee …adna ila ogsoonoow!
dhanbaal macaan 3
xasuuso oo xushmee jacaylka, qadari kalgacalka, ixtiraam wada socodka iyo xiriirka, adkee oo ilaali axdiga, ha jabin ballamaha, koolkooli caashaqa, iga ilaali dhib anna waan kaa ilaalinayaaye, I qadari oo ii xushmee maadaama aan ahay naf ku jecel rajaynaysana mustaqbalka inaad afo lagu baraaro u noqoto inshaa Allaah. Macaan maskaxdaada u isticmaal inaad uga fikirto kuna kala garato wixii xun iyo wixii san. Ahoow qof dhowrsoon oo ilaalisa diinta iyo dhaqankeeda soomaaliyed. Qiyaas oo cabbir jacaylka aan kuu qabo baaxadiisa iyo sidaan ugu heellanahay inaan jacaylkaas qiimeeyo oo ilaaliyo. Naftu adigay ku rabtaa xilli kastana adaan ku soo xasustaa mar mar kaligay baa iska ilmeeya mcn anoo haysta picturekaaga, sawirka ayaan la hadlaa oo u sheegaa inaan jeclahay iimase jawaabayo, sorry! markaasan ogaadaa hadana inuu picture yahay oo uusan hadlayn, maalintii dhowr jeer hadaanan codkaaga maqlin ama sms kaaga arkin deganaan la’aan baan dareemayaa iyo wal wal.habeenkii kaligay baan sariirta ku fakaraa anoo ku fakaraya sidaan jacaylkeenna uga guul gaari karno, macaan ilove you for eve
dhamaat dhanbaal 5
Gacaliso ugu danbayntii waxaan kudhahayaa “waan ku jeclahay” qalbigayguna aduu ku doonayaa oo kuu oomman yahay macaan farxad iigu nooloow ha murugoon waligaa oo dhib Alle kuma tuso, aad baan kuu jeclahay kulamana rabo wax ku dhiba inaad aragto mcn, gacaliso farxad iyo damaashaad iyo rayn rayn ku nooloow.
qoraa: surajyare or luckyboy (mysuraj@hotmail.com)